छोरा पाउने आशामा ज्यान जोखिममा राखेर गर्भपतन !
Fri, Mar 22, 2019 | 17:51:57 NST
15:02 PM ( 11 months ago )
बझाङ, वैशाख २ – बझाङका अधिकांश महिला गर्भपतन गर्न भारतको उत्तर प्रदेशको पलिया जाने गरेका छन् ।
छोरा पाउने आशमा गर्भपतनको चेकजाँच गर्न महिलाहरु भारत जाने गरेका हुन् । बझाङबाट पलिया पुग्न दुई दिन लाग्ने गरेको छ । एक दिन बझाङबाट धनगडी (कैलाली) पुग्न लाग्छ भने धनगडीबाट पलिया पुग्न चार दिन लाग्ने गर्छ । पाँच घण्टाको यात्रा गाडीबाट हुन्छ । भारतको पालियामा बढी जस्तो नेपाली तथा सुदूरपश्चिमका महिला जाने गर्दछन् ।
पलियामा रहेका विभिन्न मेडीकल तथा अस्पतालमा गएर नेपाली महिलाले गर्भअवथाको चेक गराउने गर्छन । उनीहरुको गर्भ चेक गर्ने उद्देश्य भने फरक हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भावस्थाका लागि भन्दा पनि छोरा छ कि छोरी भनेर जानकारी लिन उनीहरु भारत गएर गर्भको चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । भारतको पलिया गएर छोरा र छोरी के छ ? भनेर एकीन गरे वाफत पाँच हजार भारु तिर्नु पर्ने चेक गराएर आउँने महिलाहरुको भनाइ छ ।
महिलाहरुले डाक्टरको रिपोर्टमा गर्भमा छोरी भएको थाहा पाएपछि गर्भपतनको औषधि लिएर फर्किने गरेका छन् । त्यसो त २–४ जना सन्तान हुनुभन्दा अगाडि उनीहरु गर्भाअवस्थाको जानकारी लिन अस्पताल जाँदैनन् । २–४ जना सन्तान जन्माइसकेपछि मात्रै उनीहरु छोरा जन्माउने रहरका लागि अस्पतालमा गर्भ जाँच गर्न जाने गरेका छन् ।
ग्रामीण बस्तिका महिलाहरु आफ्नो ज्यानकै बाजी राखेर भए पनि छोरी भएका खण्डमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । त्यो सङ्ख्या घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको छ । २५ वर्षकी सुस्मीता लामा (नाम परिवर्तन) की छोरी ३ वर्षकी भैसकेकी छिन् । उनले एक छोरी जन्माएपछि छोरा जन्माउन २ पटक गर्भपतन गरिसकेकी छिन् । ‘आफ्नो पहिलो सन्तालन छोरी भएको र घर परिवारले छोरी भएको भन्दै पहिले नै घृणा गरे’, सुस्मीताले भनिन्, ‘त्यसपछि जन्मिने सन्तानमा छोराको आश गर्दै २ वटा गर्भपतन गराइसकेँ र फेरि गर्भवती छु ।’
२६ वर्षकी मीनी भण्डारी (नाम परिवर्तन) को छोरी ४ वर्ष भइसकेकी छिन् । पहिलो सन्तान नै छोरी भएपछि उहाँ र उहाँको परिवारले अर्को सन्तान छोरा चाहेका छन् । त्यसैका लागि भण्डारीले एक वर्षमा ३ पटकसम्म गर्भपतन गराएको बताइन । गर्भपतन गराउने उनको रहर नभए पनि परिवार र समाजका कारण जबरजस्ती उहाँले गर्भपतन गराउँदै आउनुभएको छ ।
‘एक पटक चेक अफ गराए बाफत भारतको पलियामा पाँच हजार भारु तिरेकी छु । ३ महिनाभन्दा बढी भैसके पछि मात्र छोरा छ कि छोरी भनेर राम्रोसँग जान्दो रहेछ । मसँगै तीन चार जना अरु पनि गएका थिए’, भण्डारीले भन्नुभयो, ‘२७ वर्षकी रुणा सिंह (नाम परिवर्तन) को मात्र छोरा रहेछ । अरु सबैको छोरी । मसँग गएको तीन जना सबैको गर्भ चेक गर्दा डाक्टरले छोरी छ भने पछि गर्भपतनको मोडमा हामी फर्कियौं ।’
असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको यौनीबाट सेतो पानी बग्ने, तल्लोपेट र कम्मर दुख्ने, पाठेघरमा क्यान्सर हुने, पटक–पटक असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा एनिमिक नामको रोग लाग्ने (यो रोग रगतको कमी भएर लाग्ने रोग हो), पछि गएर बच्चा नै नपाउने हुनेलगायतका समस्या हुने गरेको जिल्ला अस्पताल बझाङकी स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मि शाहीले बताउनुभयो ।
बझाङका १० प्रतिशत महिलाको पाठेघर नै फाल्नु पर्ने स्थिति सृजना भएको छ भने एक प्रतिशत महिलाले बच्चा नै नपाउने समस्या रहेको स्वास्थ्य कर्मी शाहीको भनाइ छ ।